မယ်တော်ဆေးခန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
မယ်တော်ဆေးခန်းသည် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့် ကရင်တိုင်းရင်းသား ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်က ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဦးစီးဦးဆောင်ပြု တည်ထောင်ထားသည့် ဆေးခန်းဖြစ်သည်။ မဲဆောက်နှင့် အနီးတဝိုက်ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာဒုက္ခသည်များ အဓီက အားထားရာ ဆေးခန်းလည်းဖြစ်သည်။ 
၂ မယ်တော်ဆေးခန်း၏ ရည်မှန်းချက်
၁၉၈၈ ခုနှစ် မြန်မာစစ်အစိုးရက ၈၈၈၈ အရေးအခင်းအား အင်အားသုံး ဖိနှိပ်ခြေမှုန်းခဲ့ပြီးနောက် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်သည် အခြား နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် မဲဆောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ထိုဒေသရှိ နာမကျန်းသူများအား စောင့်ရှောက်ကုသပေးရန် ဆေးပေးခန်း တစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင် လူနာပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကို ကုသပေးခဲ့သည်။  ထိုအချိန်မှစ၍ ကြီးထွားလာသည့် မယ်တော်ဆေးခန်းသည် ဆေးဝါးကုသရေးအပြင် လူမှုရေး အကျိုးဆောင်မှုများ၊ လေ့ကျင့်ရေးများ၊ ကျန်းမာရေးပညာပေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မယ်တော်ဆေးခန်းမှ ကူညီပေးခဲ့သူ ၈ သောင်းထက် မနည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ .
ယနေ့တွင် မယ်တော်ဆေးခန်းမှ ကုသပေးနေရသည့် လူနာအများစုမှာ မြန်မာအစိုးရ၏ အဓမ္မမှုကြောင့် မိမိဌာနေကို ကျောခိုင်းခဲ့ရသည့် ကရင်လူမျိုး ဒုက္ခသည်များ ဖြစ်သည်။ .
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ရှ် ဒဗလျူ ဘုရှ် တို့ ဇနီးမောင်နှံ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ချိန်တွင် လော်ရာဘုရှ် သည် မယ်တော်ဆေးခန်းသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုကာ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်နှင့် သူမ၏ အကျိုးပြု ဆောင်ရွက်ချက်များကို အားပေးထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ လော်ရာဘုရှ် က မယ်တော်ဆေးခန်းအား ဤကဲ့သို့ မီဒီယာရှေ့ မီးမောင်းထိုးခြင်းသည် နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက် ရှိနေသည်၊  မြန်မာအာဏာပိုင်များအပေါ် အမေရိကန်တို့၏ ရပ်တည်ချက်ကို ဗွင်းဗွင်းလင်းလင်း ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အချို့က ထင်ကြေးပေးကြသည်။
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တလျှောက် အပြောင်းအရွှေ့ခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးရေး၊
ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအား ကနဦးလေ့ကျင့်မှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆေးပညာ ပို့ချပေးရေး၊
နယ်စပ်ဒေသအတွင်း ကျန်းမာရေးစနစ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အားဖြည့်ပေးရေး၊
ဒေသတွင်းရှိ မြန်မာလူထုအကြား ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တိုးပွားလာစေရေး၊
ဌာနေရှိ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းပေးရေး၊
နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးဌာနများ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခြင်းကို အားဖြည့်လုပ်ဆောင်ရေး တို့ဖြစ်သည်။
ခြေတု၊ လက်တုများ တပ်ဆင်ခြင်း
HIV/AIDS ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ၁၂၀
မယ်တော်ဆေးခန်းနှင့် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍
CNN, October 10 2007 'Desperate for Help in Myanmar': http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2007/10/10/chance.thailand.refugee.doctor.cnn
You Tube, May 2006: http://www.youtube.com/watch?v=glnQr5lc_Uk
Voice of America, 25 June 2008: http://web.archive.org/web/20080628191855/http://www.voanews.com/english/Making-a-Difference-Cynthia-Maung.cfm
Time (Asia): http://web.archive.org/web/20030422124141/http://www.time.com/time/asia/2003/heroes/cynthia_maung.html
Ramon Magasaysay Award for Community Leadership: http://www.rmaf.org.ph/Awardees/Citation/CitationMaungCyn.htm
Asian Human Rights Commission: http://www.ahrchk.net/index.php
Back Packer Health Worker Team: http://web.archive.org/20070704102041/www.geocities.com/maesothtml/bphwt/
Ramon Magasaysay Award Foundation: http://www.rmaf.org.ph/
↑ ၁.၀ ၁.၁ http://www.maetaoclinic.org/aboutus.html
↑ BBC NEWS | Asia-Pacific | Saving lives on the Burmese border
↑ Ingenitex Media
↑ Statement by Mrs. Laura Bush AfteraVisit to Mae Tao Clinic
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မယ်တော်ဆေးခန်း&oldid=409302" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၃:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။